२o७६ कार्तिक १६ शनिबार
काठमाडौँ । साथिले आफू एक्लै गएर जोकर फिल्म हेरेको, फिल्म राम्रो लागेको कुरा ट्विट गरिकन दोहोर्याएर हेरेको पनि ट्विट गर्न भ्याइसकेको थियो ! आफुले भने एकचोटी हेर्ने साइत पनि जुराउन सकेको थिइँन ।
हामी ३ थियौं । हामी तिनै जनालाई जोकर भन्ने अंग्रेजी फिल्म हेर्न एक्दमै मन थियो । शो टाइम नेपालको वेब पेज हेरेर ६:१५ को शो सिटि सेन्टरको बिग मुभिज मा हेर्ने साइत जुराइयो ।
काम सकेर छिट्टै निस्कने भन्दा भन्दै ६ बज्नै लागिसकेछ ! हतार हतार निस्कियौं, ६ बजेर ८ मिनेट गैसकेको थियो, ढिलो भैसकेछ । फटाफट हिडेउ सिटि सेन्टर पुग्न....
टिकट लिने लाइन लामो रहेछ । फिल्म चलेको २ हप्ता भैसकेकोले टिकट त सजिलै पाइएला नि भन्ने सोचेका थियौं, तर त्यस्तो रहेनछ ! सानो जिउ भएको मान्छे म....भिडमा लुसुक्क छिर्न सजिलो पनि हुने....टिकट लिने भिडमा लुसुक्क छिरेर टिकट बेच्ने भाइलाई सोधेँ ६:१५ को शो, जोकर को टिकेट छ ?
६:१७ भैसकेको थियो !
उसलाई भ्याइ नभ्याई थियो टिकट बेच्न, लगभग १० मिनेट पछाडि उनले फुर्सद पाए मेरो प्रश्न सुन्ने । फेरि सोधेँ "६:१५ को शो, जोकर को टिकट छ ?"
'दुईटा मात्रै छ, तर तिम्लाई दिन मिल्दैन'
किन ? भनेर मैले सोध्न नभ्याउदै पछाडि उभिएका एकजानाले भने 'मलाई दिनु दुइटा टिकट' उ चाहिँ खुसी भएर गयो । म अचम्ममा परेको थिएँ मलाई चै किन टिकट दिन मिल्दैन ! सोधेँ 'किन ?'
'तिम्लाई भित्र छिराउदैन' टिकट बेच्ने भाइले भने झल्यास्स सम्झिएँ....उस्ले मेरो प्रश्न सुन्ने फुर्सद नपाएको समयमा टिकट लिने झ्यालको सिसामा टासिएको सूचना हेरेको थिएँ "जोकेर सिनेमा ए रेट गरिएको सिनेमा हो । आफ्नो सहि परिचयपत्र देखाएर १८ बर्ष भएको प्रमाण दिनुहोला !"
'भाइ म १८ प्लस ५ पनि भैसकें ! नागरिकता पनि छ मसँग ।'
म १८ बर्ष भैसकेको प्रमाण पेश गरेँ । दिदि हुन साह्रै खुसि लाग्ने मलाई एक किसिमको रिस नै उठ्यो उसले त्यसो भन्दा !
भिडबाट निस्किएँ, साथीहरूले सोधे 'के भयो?'
'टिकट छैन रे भएनी मलाई दिन मिल्दैन रे !' मैले भने
म तिर उनीहरुको प्रश्न तेर्सियो 'किन नि ?'
मैले सिसामा टासिंएको सुचनातिर औंला देखाइदिएँ....एकछिन् हाँसोको फोहोरा नै छुट्यो । टिकट लिने लाइन बसेकाहरुले पनि हाँस्न भ्याए । जोकर फिल्म हेर्ने टिकट नपाइएको पिर त छँदै थियो ।
आज जसरी पनि जोकर हेर्ने नै हो भनेर हिडेका थियौं हामी । एक चोटि कुमारी हलमा सोधी हेरौँ न त भन्ने सल्लाह भो र उतै लागियो...... फेरि पनि मैले नै सोधेँ 'जोकर को कुनै शो छ ?'
'छ' भन्ने जवाफ ले नै म दङ्ग भैसकेको थिएँ
फेरी सोधेँ 'कति बजेको छ ?'
'६:४५ को छ ।' उनले भने
घडी हेरे ६:३० मात्रै भएको रहेछ, फिल्म सुरु देखिनै नछुटाई हेर्न पाइने भैइयो, खुशी अझै थपियो र भने 'तीन ओटा दिनु न ' उनले सिट छान्न भने, अगाडीको दोस्रो लाइनमा मात्रै बाकी रहेछ । मैले बि को ८/९/१० सिट नंबर छानेँ ।
'४ सय ५०/-' उनले टिकटको पैसा पनि भने । ओहो मख्ख परे म त !
आज पनि छुट रहेछ । बुधबार क्युएफएक्स मा छुट पाइन्छ भन्ने त थाहा थियो तर विहिबार पनि पाइन्छ भन्ने चाँहि थाहा थिएन । फिल्म हेर्न जाँदा प्राय बुधबार नै फुर्सद मिलाउछौँ हामी, किनकि बुधबार बिग मुभिज सिटि सेन्टरमा १ सय ८५ र क्युएफएक्स को कुमारी र जय नेपाल हलमा १ सय ५०/- मा नै फिल्म हेर्न जो पाइन्छ ।
टिकट सस्तोमा पाइयो तिनैजना मख्ख भयौ खासमा । अझै अर्को कुरा यता मैले आफु १८ वर्ष भएको प्रमाण पेश गर्न परेन !
अझै समय बाँकी नै रह्रयो....भोक पनि गजब कै लागेको थियो ..... २ बजे खाएको हाल्फ प्लेट चाउमिनले धर्म छोडिसकेको थियो । खानेकुरा किन्ने लाइन बस्दै खानेकुराको रेट हेरेर हिसाब गर्न भ्याइसकेको थिएँ मैले । स्मल पपकर्न १ सय १०/- चक्लेट दुनोट १ सय २०/- सुचिको सबैभन्दा सस्तो अनि मसङ्ग भएको पैसाले यतिनै आउने रहेछ । लाइन बसेर त्यति किन्न पनि भ्याएँ । चिज नभएको पपकर्न खानुपरेकोमा सोनीको भने अनुहार ठुस्किएको थियो ।
सरसफाइको काम हुँदै रहेछ एकछिन बाहिरै बस्यौं र केही बेरमा हल खुलेपछि हाम्रो टिकेट को सिट न. हेरेर तिनैजाना म, सोनी र पुष्पा क्रमश बि को १०/९/८ नम्बरको सिटमा बस्यौं । एकैछिनमा खाइलाग्दो जिउडाल, श्याम वर्णको हसिलो अनुहार गरेको सन्दिप क्षेत्री जस्तै देखिने मान्छे र अरु दुई जना मान्छे पनि हाम्रै लाइनको सिटमा आएर बसे । टिभी मा हेर्दा गोरो देखिने सन्दिप मैले अलि कालो देखेँ । छेउमा बसेकी साथी पुष्पालाई सोधेँ, 'यो मान्छे सन्दीप क्षेत्री नै हो त ?'
'हो' उनले भनिन्
अलि नपत्याएको भावमा भनेँ 'साच्चै हो त भन्या ?'
'नपत्याको ? गएर सोधन एकपटक, मैले त धेरै पटक भेटेको पनि छुँ' पुष्पाले आफु स्पष्ट हुँदै बताइन् ।
'साँच्ची हो त, सोधम् ?' मैले भनेँ
'अँ सोध न' उनले भनिन्
फिल्म सुरु भैसकेको थिएन
आ सोद्दिन्छु एकचोटि, मनमा तुलबुल रहनुभन्दा एकपटक सोधे पछि आनन्द भन्ने सोचेँ । खाँदै गरेको चक्लेट दुनोट सथिलाई समाउन दिएर सन्दिप क्षेत्रीको अगाडि उभिएर भनेँ - 'सुन्नुन'
अलि गम्भिर भावमा उनको जवाफ आयो - 'भन्नुन'
उनले भन्नुन भन्ने स्विकृति दिइसकेपछि मैले भनेँ - तपाई सच्चिकै सन्दिप क्षेत्री नै हो त?
आश्चर्य भावको हाँसोसहित 'हो !' उनले भने, उनको हँसाइ पनि ठ्याक्कै टिभीमा देखिने सन्दिप क्षेत्रीकै जस्तो देखिन्थ्यो ।
हैन क्या, मैले तपाईलाई टिभिमा अलि गोरो देखे थेँ, यहाँ त अलि कालो देखेँ त्यहि भएर सोधेको....मैँले भने ।
उही हाँसो सहित जवाफ आयो..... 'यहाँ अँध्यारो भएर होला !' वरपरका सबै हाँसे...हाँसोको माहोल बन्यो फेरी एकपटक ।
म आफ्नै सिटमा फर्किएँ, अनि सुरु भयो फिल्म जोकर....
सिनेमामा जोकेर को एक्टिङ्ग गजब माने मैले, अनुहारमा जोकरको मेकअप, आँखामा गहिरो पिडाको भाव, आफ्नो जिन्दगी सङ्ग १ पल पनि खुशी नहुने ब्यक्तिको अट्टाहास हाँसो, एकैपटक त्यो सबै एक्सप्रेसन देखाउन सक्नु सानो कलाकारिता अवश्य हैन, कथावस्तु त्यस्तै गज्जब छ ।
आफ्नी आमालाई एकदमै माया गर्ने छोरा हुन्छन् जोकर, उनीहरु आमाछोरा नै एक अर्काको साहारा हुन्छन् । जोकरले आमाको राम्रो ख्याल राख्छ । आफ्नी आमाले सिकाए जस्तै अनुहारमा सधैँ मुस्कान राख्छ, जो आफ्नो पुरै जिन्दगिमा १ पल पनि खुसी भएको हुँदैन ।
बच्चामा उसलाई कमेडियन बन्ने रहर हुन्छ, उस्को कमेडियन बन्ने कुरा सुनेर सबै हाँस्थे त्यतिबेला तर जब उस्ले साँच्चै नै हँसाउन खोज्छ तब कोहि हाँस्दिदैनन् ।
उसलाई आफू बचेर भन्दा मरेपछि आफुले धेरै महत्व पाउछु भन्ने भान हुन्छ । यतिसम्म कि उसलाई आफू बाँचिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरामा समेत कन्फ्युज हुन्छ ।
'मान्छे तिमीबाट त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छ जुन तिमी चाहदैनौ र हैनौ ।' जोकरले आफ्नो जीवनमा सिकेको पाठ हो यो ।
फिल्म मध्यान्तर हुन्छ....
सबै बाहिर निस्किन्छन् सन्दिप क्षेत्री र उनी सङ्गै रहेका अर्का दुई व्यक्ति पनि निस्किसकेछन् । आफ्नो पालो र काम सकेर हल भित्र जाँदा सन्दिप र उनी सङ्ग रहेका अरु दुई पनि आ-आफ्नो सिटमा बसिसकेछन्.....
उनको एकापट्टि छेउमा रहेका व्यक्तिले भने "सन्दिप यहि केटि हैन?"
"हो" सन्दिपको जवाफ मेरो कानमा पर्यो ।
सन्दिपका नजिक २/३ वटा पङ्क्तिमा रहेका जोकर हेर्न आएका दर्शकहरु फेरि हाँसे गलल्ल....
फिल्मको बाँकी अंश सुरु हुन्छ......
जोकरकी आमा, जो उनलाई जन्म दिने आमा हुन्नन्, उनलाई भ्रममा रहने रोग हुन्छ । जोकर र उनकी आमा दुबै भ्रममा बाँचिरहेका हुन्छन् । जोकर पनि त्यस्तै रोगको कारण आफ्नो अनकन्डिस्नल हाँसो नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । आफ्नो अनकन्डिस्नल हाँसोकै कारण ऊ कमेडियन बन्न सक्दैन, जोकरले कसैलाई हँसाउन सक्दैन ।
उसलाई आफ्नो जिन्दगी एउटा वियोगको कथा हो जस्तो लाग्छ तर अरुलाई त्यो हाँस्यास्पद कथा बनिदिन्छ ।
उ सँधै हाँस्छ तर खुशी कहिल्यै पनि हुँदैन ! उस्को हाँसोको आवाज जति ठूलो सुनिन्छ त्यति नै भयानक पिडाले पिल्सिएको धुवाँको मुस्लो निस्किएको जस्तो भान हुन्छ ।
सिनेमा सकिएर घर फर्किन लाग्दा फेरि भेटिए सन्दिप क्षेत्री, उनी नेपालका नाम चलेका कमेडियन हुन्....
मौकामा उनलाई पनि केहि प्रश्न सोधु न त भन्ने लाग्यो र मनमा प्रश्न उब्जियो.....उनलाई कमेडियन बन्ने रहर कसरी पलायो ? केही त्यस्तो कथा छ कि उनको जीवनमा पनि ? अनि सोधेँ " तपाई पनि कमेडियन हुनुहुन्छ, तपाईलाई चाँहि कमेडियन बन्न के ले प्रेरित गर्यो, केही त्यस्तो सेक्रेट छ कि ?"
उनले यति भन्न भ्याए "म टिभिमा देख्दा मात्रै गोरो देखिन्छु नभए कालो, यति मात्रै हो मेरो सेक्रेट"
सायद उनलाई पनि म १८+ जस्तो लागिन होला ! मेरो अपरिपक्क प्रश्न गर्ने शैलीले पत्याएनन् सायद म उनलाई प्रश्न गर्न सक्ने खुबि भएकी मान्छे हुँ भनेर । अथवा उनलाई पनि रिस उठ्यो, मैले टिभीमा भन्दा कालो देखिनुहुन्छ भनेर सिनेमा हलमा सबैको अगाडी भनेकोमा ! यो उनै जानुन् ।
हामीलाई भने फर्किँदा बाटो भरि हाँस्न पुग्ने मसला पुगिसकेको थियो !
म भने सोच्दै थिएँ यो सबै घटनामा जोकर म भएँ की सिनेमाका पात्र जकिन फोनिक्स ???
सामा चकेवा पर्वले स्नेहपूर्ण वातावरणको अनुभूति
जनकपुरधाम । आबह सामा, आबह चकेवा हे अपन देश भाइ मोर हे आशीष दैह जीबह भाइ लाख बरीस हमर सामा हे कार्तिक मास।।। सांस्कृतिक पर्व सामा चकेवा अन्तर्गत आ–आफ्ना भाइलाई आशीष दिन विन्ती गरिएका गीतले
एक हजारको नक्कली नोट फेला
सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण